Kwili hlabathi lanamhlanje, abahlali basezidolophini bahlala bejongana neengxaki zokuxhatshazwa kunye nokukhungatheka ngexesha lokucwangciswa kwamanzi ashushu. Ngesizathu, izinto ezinokusetyenziswa ziyakwazi ukuvakaliswa kakhulu, kodwa nguyena ozifunayo? Ukongezelela, ingxaki yokungabikho kokubonelela kwamanzi ngokufanelekileyo akuphazamisi kuphela abahlali bemizi, kodwa nabanikazi bezindlu zangasese kunye neendawo zokuhlala amanzi apho kungenakunikwa amanzi.
Ukuqaphela ukuba ukuvalwa kwamanzi okuchanekileyo akungenakwenzeka kwangezelele ekuxolweni kwethu kwengqondo kunye nokwaneliseka kwansuku zonke. Xa sibhekene neemeko ezinjalo, abantu baninzi bathambekele ekuthengeni amanzi. Kwaye, oku kunjalo, isigqibo esifanelekileyo. Intuthuzelo yobomi bethu isezandleni zethu. Akuyimfuneko ukuvumela iimeko ezingalindelekanga ukuba ziphule izicwangciso zazo kwaye zichithe ingqondo. Ukuba esi sigqibo sifikelelwe nguwe, khawuleza uqhubeke nokuqokelela ulwazi oluncedo ukwenzela ukuba ibhoyili ekhethiweyo ikwazi ukuhlangabezana neemfuno zakho ngokupheleleyo. Apha ndicinga ngeenzuzo kunye nokuphazamiseka kokugcina amanzi kunye nokuhamba kwamanzi.
Iinjongo zokugcina amanzi amanzi
Umbane wokugcina amanzi awuzithobeki kumandla, ngoko ukufakela kwawo kunokwenzeka malunga naluphi na igumbi.
Ukufakwa kwezixhobo kwenziwa lula nangaphandle kobuchwepheshe, kuba ulwazi olukhethekileyo kunye nezakhono azidingeki kule nto. Kwanele kuphela ukulandela imiyalelo enikwe imiyalelo kumchwepheli. Emva kwayo yonke into eyenziwa ngayo, ibhoyili ixhunyiwe kwi-outlet kwaye, indumiso kubavelisi, amanzi ayatshiswa.
Inzuzo engenakukhunjulwa kukukhetha okubanzi kuninzi kwamanzi okugcina amanzi kwimarike. Unokufumana imodeli ukunambitha, umbala kunye nekhredithi.
Ukungalungi kwamanzi okugcina amanzi
Umgaqo wokusebenza kwendawo yokugcina amanzi yendawo yokugcina amanzi yinto yokuba ukuhamba kwexesha elilodwa lamanzi ashushu akudluli umthamo wetanki. Ngesi sizathu, iintsapho ezininzi ziyanyanzeliswa ukuba zikhethe iibilisi ezininzi, ezingenakuyithokozisa ngokulandelelana kunye nokugcina indawo. Ngokukodwa ezi zinto zibalulekileyo ukuba izakhiwo zizincinci.
Umbane wokugcina amanzi uza kuthatha ixesha elide ukuba ukwazi ukusebenzisa amanzi afudumeleyo.
Ukuqhutyelwa ngaphandle kweengxaki zentlambo yamanzi, kuya kufuneka uhlambulule kwinqanaba emva kweenyanga ezintandathu kwaye ubeke indawo ye-anode ye-magnesium.
Iingenelelo zokufudumala kwamanzi
Umlilo okhulayo ngexesha elivumela ukusetyenziswa kwamanzi ashushu amaninzi njengoko kufuneka. Imimiselo ayinikeziwe.
Le mibhobho ilula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye ayifuni ukulungiswa rhoqo.
Ubukhulu bayo bunzima kakhulu, ngoko lufanelekile nayiphi na indawo.
Iingxaki zokusebenzisa iifutha zamanzi
Enye yeemeko zokufaka ifowuni yamanzi iphezulu ngamandla. Abanye abantu kufuneka bavuselele i-wiring ekhaya, ukuba kukho iimvume ezifanelekileyo. Kwimeko apho i-wiring yalo mthwalo ingabalwa, ukhetho nge-bhoiler ehambayo ayicatshangwanga.
Umlambo wamanzi udibene kuphela kumpompo wamanzi. Ukuba ukuxhamla kuyimfuneko kungekhona kwipompo kuphela, kodwa kumphefumlo, umzekelo, lungele ukwandisa amandla.
Ngoku, xa uyakwazi ngokwaneleyo malunga nokusebenza kwamanzi kunye nokugcina amanzi, unokubeka zonke izinto ezifanelekileyo kunye neqhinga kwizinga kwaye wenze lula ukukhetha okulungileyo. Ndiyathanda ukuba uphumelele kulo mzamo omkhulu.
Ngaba kulungile ukuthenga iplasamic plate?
Ukukhetha Ifowuni Yowesetyhini
Indlela yokukhetha ngokufanelekileyo intetho yentombazana?
Njalo unxibelelwano: i-"ephakade" i-smartphone esuka ku-Oukitel
Ndibetha awuyi kuqaphela ukuba le nto isetyenziswe ntoni?
Kanjani, ekugqibeleni, ukulahla uphawu lokulondeka?
Indlela yokuba ngumphefumlo wanophi na inkampani
Amaqabunga ehovini ye-microwave